WARBIXIN: 20-ka Tababare Ee Ugu Fiican Adduunka Kubada Cagta Wakhti Xaadirkan – Kooxda.com
HomeWararka MaantaWARBIXIN: 20-ka Tababare Ee Ugu Fiican Adduunka Kubada Cagta Wakhti Xaadirkan
August 1, 2020 Abdiwali Adan Jamac Wararka Maanta, Warbixino 0
Kadib bilo adduunka oo dhan laga ciyaaray kubada cagta waxa soo dhamaaday xilli ciyaareedkii ugu dheeraa taariikhda kubada cagta.
Qaar ka mid ah dalalka ayaa kansalay horyaalka sabab la xidhiidha xanuunka Korona halka dalalka qaar lagu ciyaaray kulamada bilaa taageerayaal.
Si kasta ha ahaatee waxa la soo dhamaystiray horyaalada yurub intii dib loo bilaabay waxana haatan la bilaabay qiimaynta kuwa ugu fiican iyo kuwa ugu xun.
Dhanka tababarayaasha waxa ay u ahayd wakhti la yaab leh kadib fasax 3 bilood ah waxa tababarayaasha loo xil saaray in ay xiddigaha ka caawiyaan in ay diirada saaraan kaliya kubada cagta iskana iloobaan waxa agtooda ka dhacay.
Waxa jira tababarayaal badan oo sida ugu fiican u sii watay shaqadooda inkasta oo ay jirto shaqo adag oo is badal weyn ku dhacay kubada cagta.
Kooxda.com ayaa todobaadyadii ugu dambeeyay idiin soo gudbinaysay xiddigaha ugu fiican booskooda xilli ciyaareedkan.
Hadaba warbixintan waxa aan ku soo bandhigi doonaa 20-ka tabaabre ee ugu fiican adduunka sanadkan.
1 – Jurgen Klopp (Liverpool):
Tababare Jurgen klopp ayaa ku soo baxay kaalinta 1-aad ee liiska kadib markii uu ugu dambayn kooxda Liverpool ka caawiyay ku guulaysiga horyaalka premier League oo ay muddo 30 sano ah sugayeen.
Klopp ayaa dhisay koox adag oo Premier League awood ku qabsatay xilli ciyaareedka dhamaaday iyaga oo 18 dhibcood ku qaaday horyaalka waliba loo caleemo saaray iyada oo 7 kulan ka dhimantahay dhamaadka xilli ciyaareedka.
2 – Gian Piero Gasperini (Atalanta):
Tababare Gasperini ayaa dhisay koox ka yaabsatay Adduunka oo dhan laguna magacaabo Atalanta isaga oo xilli ciyaareedkan kooxdiisa ku hogaamiyay 8 Dhamaadka Champions League.
Tababarahan oo kooxda Atalanta hogaaminyay ilaa 2016 ayaa si hoose u soo dhisayay koox awood leh oo sanadkan muujisay awoodooda waxana ay wacdaro ka dhigaysaa Serie A-da xilli ciyaareedkan.
3 – Zinedine Zidane (Real Madrid):
Zidane ayaa qabtay shaqo fiican oo Real Madrid ah xilli ciyaareedkan isaga oo Los Blancos ku hogaamiyay ku guulaysiga Horyaalka La Liga markii ugu horaysay muddo 3 sano ah.
Zidane oo u muuqda mid koobabka soo jiita ayaa markii uu ku soo laabtay kooxda sanadkii ugu horeeyay ku hogaamiyay koob waxana uu waliba dhisay koox tayo leh oo aan la loodin karin.
4 – Hans-Dieter Flick (Bayern Munich):
Tababaraha Hans-Dieter Flick ayaa Bayern Munich la wareegay iyaga oo ku jira wakhti adag waliba guuldaro 5/1 ah kala kulmay kooxda Eintracht Frankfurt iyaga oo u muuqday kooxdii ugu xumayd ee Bayern Munich ee la arkay.
Laakiin tababaraha Hans-Dieter Flick ayaa kooxda la wareegay bishii November waxana uu dib u soo celiyay halistii Bayern Munich iyada oo kooxdu difaatay horyaalka Bundesliga xilli ciyaareedkan.
5 – Julian Nagelsmann (RB Leipzig):
Shaki la’aan waxa ay u muuqataa in uu Nagelsmann qabtay shaqada ugu fiican ee tababarayashan marka loo eego da’diisa iyo kooxda uu hogaaminayo.
Nagelsmann ayaa kooxdiisa ku hogaamiyay 8 Dhamaadka champions League xilli ciyaareedkan waxana ay isha ku hayaan in ay sii wadaan tartanka ay ugu jiraan koobka.
9 – Pep Guardiola (Manchester City)
10 – Antonio Conte (Inter)
11 – Diego Simeone (Atletico Madrid)
12 – Jorge Jesus (Flamengo)
13 – Jesse Marsch (Red Bull Salzburg)
14 – Julen Lopetegui (Sevilla)
15 – Julien Stéphan (Rennes)
16 – Roberto De Zerbi (Sassuolo)
17 – José Bordalás (Getafe)
18 – Nuno Espirito Santo (Wolves)
19 – Marco Rose (Borussia Monchengladbach)
20 – Carlos Carvalhal (Rio Ave)
Martin Keown Oo Magacaabay Labad Xiddig Ee Go’aamin Kara Kulanka Chelsea Vs Arsenal Ee Final-ka FA Cup-ka.